टीकापुर हुँदै लोकतन्त्रको बाटो- विचार - कान्तिपुर समाचार
टीकापुर हुँदै लोकतन्त्रको बाटो
लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा असहमतिको स्वरलाई राजद्रोह मानिँदैन । असहमतिको स्वर त लोकतन्त्रका लागि 'सेफ्टी भल्भ’ हुन्छ
भाद्र ३, २०७८ चन्द्रकिशोर
भारतीय कवि सर्वेश्वरदयाल सक्सेनाको एउटा प्रसिद्ध कविता छ— देश कागजमा कोरिएको नक्सा होइन । त्यसमा कविले भनेका छन्, ‘यदि तुम्हारे घर के/एक कमरे में आग लगी हो/तो क्या तुम/दूसरे कमरे में सो सकते हो ?/यदि तुम्हारे घर के एक कमरे में/लाशें सड रहीं हों/तो क्या तुम/दूसरे कमरे में प्रार्थना कर सकते हो ?/यदि हाँ/तो मुझे तुम से/कुछ नहीं कहना है ।’
त्यस कवितामा उनी आफ्नो दृष्टि राख्दै जोड्छन्, ‘देश कागजमा कोरिएको नक्सा हुँदैन कि एउटा हिस्सा च्यातिन जाँदा बाँकी हिस्सा साबुतै रहिरहोस् ।’ कुनै पनि देश विश्वासबिना निर्माण हुन सक्दैन । उसो त यो विश्वास एउटा अमूर्त संकल्पना हो । कुनै पनि मुलुकको अस्तित्व तबसम्म रहन्छ जबसम्म त्यहाँका बासिन्दाहरूमा हामी एकअर्काका अभिन्न हौं भन्ने विश्वास कायम रहन्छ । यो अभिन्नताको भाव नै राष्ट्रिय सामर्थ्य हो ।
त्यसैले इतिहासको विरासतमा प्राप्त राजनीतिक भूगोलमा कस्तो राज्य खडा गर्ने भन्ने विमर्श, दाबी र प्रतिदाबी चलिरहन्छ । एकांगी दृष्टिकोणमा आधारित राजनीतिक अवधारणा लिएर अघि बढ्ने जहाँ त्यो भूगोल कुनै खास वर्ग र समुदायको हुन्छ कि समन्वयकारी दृष्टिकोणसहित अघि लाग्ने जहाँ सबैलाई विश्वास होस् ? राज्य निर्माणको जगमा समन्वयकारी दृष्टिकोण राखियो कि राखिएन, त्यो महत्त्वपूर्ण हुन्छ । कुनै पनि मुलुक आफ्नो अतीतबाट पृथक् रहन सक्दैन । अतीतमा भएगरेका चूकलाई सबै मिलेर सच्याउने कि आआफ्नो तालमा अतीतको चूकका आधारमा प्रतिशोधी मानसमा बाँच्ने ? विविधतायुक्त समाज यस्ता परिस्थितिहरूबाट गुज्रिरहेको पाइन्छ । यिनै परिस्थितिले उब्जाउने प्रश्न हो— जनता ल्याएको कि शासकले ल्याएको संविधान शक्तिशाली ? जनता नै प्राथमिकतामा रहनुपर्छ र त्यस्तो अवस्थामै राष्ट्रहित र जनहित सुरक्षित रहन सक्छ । लोकतन्त्रमा शक्तिको मापन कुन दल वा पात्रले कुन हैसियत पायोभन्दा पनि जनता बलियो भए कि भएनन् भनेर गरिन्छ । कार्यकारीको पोल्टामा केन्द्रित असीम शक्ति र फराकिलो कार्यादेशले जनतालाई जोड्न सकेन भने उसको कार्यकाल प्रभावकारी मानिँदैन ।
लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा असहमतिको स्वरलाई राजद्रोह मानिँदैन । असहमतिको स्वर त लोकतन्त्रका लागि ‘सेफ्टी भल्भ’ हुन्छ । असहमतिको मानसलाई राष्ट्रविरोधी वा लोकतन्त्रविरोधी भन्नु लोकतन्त्रमाथि नै हमला हो । दृष्टिकोणको भिन्नतालाई थिच्नु भनेको देशको अन्तरात्मालाई थिच्नु हो । निर्वाचित सरकारलाई हिंसा वा अवैध तरिकाबाट अपदस्थ गर्ने सोच्नु चाहिँ राष्ट्रद्रोह हो । मुलुक वा यसले आत्मवरण गरेको संविधानको आलोचना आफैंमा राष्ट्रद्रोह होइन । प्रत्येक नागरिक वा समुदायलाई आफ्नो हित लागेको विषयमा बोल्ने, संगठित हुने, अहिंसक तरिकाले आफ्ना कुरा राख्ने स्वतन्त्रता हुनु नै लोकतन्त्रको सौन्दर्य हो । राज्य स्वयंले कुनै क्षेत्र वा समुदायप्रति पूर्वाग्रह राख्न मिल्दैन । बरु देशवासीहरूले आफ्नो ठम्याइका आधारमा राज्यप्रति पूर्वाग्रह राख्न सक्छन् । तैपनि त्यसलाई संयमित व्यवहारले सुधार्न प्रेरित गर्नु राज्यकै दायित्व हुन्छ ।
राज्य र समाजको बनोटका आधारमा सामाजिक न्यायको राजनीतिका लागि कठिनाइ वा सम्भावनायुक्त समय परिभाषित हुने गर्छ । स्वयं जनताकै भरोसा रहेन भने सामाजिक न्यायको राजनीतिको तत्कालका लागि अन्त्य हुन पुग्छ । सामाजिक न्यायको राजनीतिलाई नेतृत्व गर्ने शक्ति वा नेतृत्वमै कुनै गम्भीर समस्या रहेको र तिनका सीमाहरू मुखरित हुँदै आएको स्थिति पनि देखिन्छ । कतै कुनै समुदायले नै आन्दोलन चलाइरहेको हुन्छ । यस्तोमा कुनै बलियो संगठनले नभई वञ्चित तप्काले नै जुझारुपन प्रदर्शित गरिरहेको हुन्छ । नेतृत्व सबल नरहे पनि जनभित्रको स्पिरिटले सामाजिक अन्याय र त्यसको खिलाफ जनताको स्तरमा प्रतिरोध चलिरहन्छ । सँगै समाज वा राज्यमा जन्म–आधारित पहिचानका आधारमा पूर्वाग्रह र विभेद पनि जारी रहन्छ । तर राज्य आलोचनात्मक टिप्पणीहरूबाट सजग रही आन्तरिक सुधारका लागि सधैं ध्येयनिष्ठ रहन्छ भने राज्य र समाजमा रहेका अन्यायी थितिहरू सच्चिँदै जान्छन् ।
यस प्राचीन मुलुकका सयौं फूलका थुँगाहरूले आआफ्ना आस्थाका साथ निर्भीक भई बाँच्न र देशलाई एउटा परिवारका रूपमा अघि लैजान सकून् भनेर हामीले नयाँ पिँढीलाई अगाडिको बाटो देखाउन सक्यौं भने यसलाई हालका लागि ठूलो सफलता मानिनेछ । हामीले वञ्चितहरूलाई बाटो बिराउनबाट जोगाएर लिकमा ल्याउन विनम्र कोसिस गरेका थियौं भनी भोलिका पथप्रदर्शकहरू बुझ्नेछन् । नेपालको नागरिक आन्दोलनको परीक्षा–काल हो यो ।
प्रकाशित : भाद्र ३, २०७८ ०८:१९